अखबार पाटी //अविस्मरणीय शैलुङ यात्रा.... (फोटो फिचर सहित) - अखबार पाटी //
तादी खोलामा माछा मार्दा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु
अब ३९ रुपैयाँमा २४ घण्टा अनलिमिटेड डेटा
नेपाली सेनाले खुला सामरिक लेख प्रतियोगिता गर्ने, प्रथम पुरस्कार दुई लाख ( यसरी पठाउनुहोस् )
पदमुक्त भएको तीन दिनपछि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त
अन्ततः यसरी भए ओली नै प्रधानमन्त्री
बसुन्धारास्थीत राधा स्वामी भवनमा २०० बेडको आइसोलेसन सञ्चालन हुँदै
फेरी उँभो लाग्यो कोरोनाको मृत्यु ग्राफ
टेष्ट टिम आयरल्याण्डविरुद्ध नेदरल्याण्ड्सको फराकिलो जित
यसरी गठन हुन्छ नयाँ सरकार
नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको ७२ घण्टाको समयसीमा आज सकिँदै
अविस्मरणीय शैलुङ यात्रा…. (फोटो फिचर सहित)
प्रकाशित मिति :२०७८ बैशाख १, बुधबार
अनुमानित पढ्न लाग्ने समय :4मिनेट
वैशाख १, नुवाकोट ।
२०७६ पुष ८ गते खाजा खाने समयमा अचानक यात्राको योजना बन्यो । १० गते क्रिशमस र ११ गते शनिबार पर्ने भएकोले सहकर्मी साथीहरुले ३ दिने यात्राको खाका बनाउनु भयो ।
९ गते दिउँसोबाट शुरु हुने उक्त यात्रा योजना काठमाडौँ, बनेपा हुँदै रामेछापको मन्थली, शैलुङ, दोलखाको भिमेश्वर, कालिन्चोक पुगेर पुनः काठमाडौँ हुँदै नुवाकोट फर्कने गरी बनाइयो । सोही अनुरुप तोकिएकै दिन हाम्रो यात्रा शुरु भयो । २ जना सवारी चालक साथीहरु समेत गरेर १३ जनाको हाम्रो टोलीले पहिलो दिन रामेछापको मन्थलीमा गएर विश्राम गर्यो ।
छोटो समयमा धेरै ठाउँ पुग्ने लक्ष्य राखिएका कारण हाम्रो रफ्तार अलि बढी नै थियो । चालक साथीहरु पनि निकै थाकेका थिए । अँध्यारोमा बास बस्न मन्थली पुगेका हामी भोली पल्ट उज्यालो खसे पछि, खिम्ति तामाकोसी हुँदै शैलुङतर्फ मोडियौँ ।
पछिल्लो समय शैलुङ एउटा दोलखा जिल्लाको रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित हुँदै गएको छ। समुन्द्री सतहबाट करीब ३४०० मिटरको उचाईमा रहेको शैलुङ क्षेत्र दोलखा जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित रहेको छ। शैलुङ डाँडा प्रकृतिले सुन्दर स्थलको रूपमा मात्र नभएर धार्मिक स्थलको रूपमा पनि परिचित छ । यहाँ जनैपूर्णिमा, बालाचतुर्दशी, बारवर्षे मेला जस्ता चाडमा धेरै दर्शनार्थीहरूको भीड लाग्ने गर्दछ।
शैलुङ तामाङ भाषाबाट राखिएको नाम हो । जसको अर्थ “शै” भनेको सय र “लुङ” भनेको थुम्का भन्ने बुझिन्छ। हुन पनि शैलुङ १०० वटा अग्ला र होचा हेर्नलायक मनमोहक सुन्दर थुम्काथुम्की डाँडाहरूले जोडिएर वनेको छ। सवैभन्दा उचाइमा रहेको थुम्काबाट हेर्दा तलतिरका ससाना थुम्काहरु र वरपरबाट आँखा जुधाईरहेका गौरीशंकर हिमाल , सगरमाथा, माछापुच्छ्रे हिमाल, गणेश हिमाल लगायत हिम चुचुरा एवं श्रृङ्खालाहरु मनमोहक देखिन्छन् । त्यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यका र तराईका केही भागहरू समेत देखिने भएकोले यो स्थान अझ रमणीय पर्यटकीय स्थल बन्न सफल भएको छ।
शैलुङमा शैलुङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर समेत रहेको छ । यसबाहेक १२ वर्षमा एकपटक खुल्ने गदौरी जस्ता धार्मिक रूपले चर्चित गुफा पनि अवस्थित छ। चारैतिर देखिने मनोरम हिमशिखरहरू, वनैभरि नाच्ने डाँफेमुनाल, चौंरी र विभिन्न जातजातिका चराचुरीङ्गी एंव जंगली जनावरहरूले शैलुङ डाँडा धार्मिक एबम पर्यटकिय महत्त्व बोकेको स्थानको रूपमा चिरपरिचित रहदै आएकोछ। साथै थुम्कामा हिउँद महिनामा सेताम्मे हिउँ पर्ने भएकोले यसबेला हिउँप्रेमीहरूको धेरै भीड लाग्ने गर्दछ। त्यतिबेला हिउँमा खेल्नको लागि धेरै ठाऊँबाट पर्यटकहरू आई हिउँमा खेल्ने र सेताम्मे शैलुङको प्राकृतिक स्वाद लिने गर्दछ्न।
हिउँदमा घाँसहरु मरेर फुस्रो देखिने शैलुङ क्षेत्र वर्षायाममा झनै मनमोहक बन्छ । भुँईघास मात्र रहेको थुम्काहरुमा चरिरहेका भेडा च्याँग्रा, चौँरी गाई र घोडा हेर्दा कतै हामी युरोपमा पो छौँकी भन्ने भान पर्ने केही आन्तरिक पर्यटकको अनुभव छ । शैलुङको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यहाको चौंरीको दूधबाट बन्ने विभिन्न प्रकारका परिकारहरू पनि पर्दछन । यहाँका बासिन्दाहरू प्राय सबैले चौंरीपालन गर्नेगर्छन् र उत्पादित चौंरीको दूधबाट उनीहरू मिठा छुर्पी, चिज बनाएर विभिन्न ठाउँमा लगेर बिक्रिबितरण गर्नेगर्दछन। यसको अलावा यस क्षेत्रमा बहुमुल्य जंगली जडिबुटी पाँचऔंले, चिराइतो, मजिटो, च्याउ लगायत अन्य धेरै जडिबुटीहरू पनि प्रशस्तै मात्रामा पाइन्छ।
शैलुङ क्षेत्र शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धिको द्वार पनि हो । यहि सम्भावनालाई मध्य नजर गरेर गाउँपालिकाले रु. ५ लाखको लागतमा २५० केजीको घण्ट समेत राखेको छ । यसबाहेक यहाँ निर्माण गरिएको भ्यु टावर, माने आदि दर्शनिय छन् । हावाको उच्च वहावमा फर्फराइरहेका झण्डाहरुले पर्यटकलाई स्वर्गिय आनन्द दिने हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्यौँ । पछिल्लो समयत शैलुङ, फेशबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिने भिडियो बनाउने मात्र नभई वृत्तचित्र र फिल्महरुको सुटिङ स्पट समेत बन्दै गएको छ ।
मनले त्यहिँ बसिरहुँ जस्तो लागे पनि खाली हुँदै गएको पेट र घर्कँदै गएको समयले हामीलाई शैलुङ छाड्न बाध्य बनायो । अन्ततः हामी, दोलखा भिमेश्वर हुँदै कालिन्चोक दर्शन गरेर साँझ मुडेसम्मको यात्रा तय गर्यौँ । गाडीको तेज रफ्तार छिनछिनमै लेक बेसी गरिरहँदा हामी मध्ये धेरैलाई गाडी लाग्यो । अरु त अरु सवारी चालक मित्रले समेत गाडी रोकेर बान्ता गर्नु पर्ने गरी गाडी लाग्यो । यसरी यात्रा गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि थियो, किनभने भोलीपल्ट अर्थात ११ गते १० बजे कुनै हालतमा पनि हामी कार्यालय हाजिर हुनै पथ्र्यो । यात्रा अलि कठिन भए पनि त्यसबीचमा भोगेका आनन्द बर्णन गरेर नसकिने खालको छ । शैलुङका सय थुम्काहरु मानसपटलमा अझै पनि उस्तै गरेर उचालिएको देखिन्छ ।
रेम्डेसिभिर औषधि आवश्यक परे गर्नुस् यी नम्बरमा फोन
भदौ १६ सम्म ४२ हजार जनाको ज्यान जान सक्ने प्रक्षेपण
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मुलुकभर ‘रेड अलर्ट’ घोषणा
भारतीय भेरियन्टमा खोपले काम गरेको छ : अध्ययन
सोच्नै नसकिने गरी बढ्यो खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोल डिजलको मुल्य !
नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा फेला पर्यो एक अनौठो किरा ( फोटो फिचर )
सर्वसाधारणको लागि वाईवाई चाउचाउको १६ अर्वको आईपीओ आउदै ( पूरा विवरण )
९० लाख कित्ताको आईपीओ आउँदै ( पुरा जानकारी )
सोमबारदेखि सुरु हुने सबै परीक्षाहरु स्थगित गर्न सिफारिस
अध्यक्ष/संचालक : उमेश थापा
कम्पनी दर्ता नं :२५०४३६/०७७/०७८
स्थाई लेखा नं : ६०९८८१८५५
सुचना बिभाग दर्ता :___०७७/७८
प्रेस काउन्सील सुचिकृत नं :__
सम्पादक : बसन्त तिमिल्सिना
सल्लाहकार: शशी आचार्य
© 2021: अखबार पाटी // मा सर्बाधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा